porn စွဲမကြာခင်မှာပဲလက်စွဲစာအုပ်အတွက် WHO ကရဲ့ Diagnostic (ICD-11) ကိုသုံးပြီး Diagnosable သူများဖြစ်ကြလိမ့်မည်
သငျသညျ 2013 ထဲမှာ, ၏အယ်ဒီတာများကိုကြားကြပေမည်ကဲ့သို့ပင် diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ် (DSM-5), စိတ်ကျန်းမာရေး diagnoses lists သောလို့ခေါ်တဲ့ရောဂါပေါင်းထည့်ရန်ငြင်းဆန် "Hypersexual Disorder ။ " ဤသို့သောရောဂါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစှဲရှာဖွေရေးမှာရန်အသုံးပြုခဲ့ကြနိုင်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါ ဒီသူတို့အားဆင်းရဲခက်ခဲမှုကိုအဘို့ကိုအဓိကပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်:
ဤသည်ဖယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး, သုတေသနနှင့်ကုသရေးအားထုတ်မှုနှောင့်နှေးခြင်း, အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါများအတွက်တရားဝင်ရောဂါမရှိဘဲ Clinician ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ အဆိုပါအဖြစ်လူသိများ, ကိုယ်ပိုင်အဖြေရှာတဲ့လက်စွဲစာအုပ်ထုတ်ဝေ ရောဂါ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွဲခြားရေး (ICD), အရာစိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းအပါအဝင်အားလုံးသိကြရောဂါများများအတွက်အဖြေရှာတဲ့ codes တွေကိုပါဝင်သည်။ ဒါဟာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အသုံးပြုသည်, ထိုသို့ပွင့်လင်းမူပိုင်ခွင့်အောက်တွင်ထုတ်ဝေနေသည်။
ဒါကြောင့်အဘယျကွောငျ့ DSM အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကျယ်ပြန့်သုံးထားသလဲ? အဆိုပါယားကြောင့် ICD ၏အစား DSM ၏အသုံးပြုမှုကိုအားပေးအားမြှောက် အဆိုပါယားဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာရရှိ အဆိုပါ DSM သက်ဆိုင်သော၎င်း၏မူပိုင်ခွင့်ရထားသည့်ပစ္စည်းများရောင်းချခြင်း။ တခြားနေရာကမ္ဘာပေါ်မှာသို့သော်အများဆုံးယောဂီအခမဲ့ ICD အပေါ်အားကိုး။ တကယ်တော့, နှစ်ဦးစလုံးလက်စွဲထဲမှာကုဒ်နံပါတ်များ ICD မှညီ။
နောက်ထပ် ICD ထုတ်ဝေမှုဖြစ်သော ICD-11 ကို (၂၀၁၈) တွင်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ထုတ်ဝေနိုင်သည် (စိတ်ကျန်းမာရေးအပိုင်းကိုနှောင့်နှေး။ သီးခြားစီထုတ်ဝေနိုင်သည်) ။ DSM-2018 အယ်ဒီတာများနှင့်မတူသည်မှာ ICD-5 ၏အယ်ဒီတာများသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဆိုင်ရာရောဂါအသစ်တစ်ခုကိုလိင်စိတ်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများနှင့် ပတ်သတ်၍ ရောဂါရှိသူများနှင့် ပါတ်သက်၍ ထည့်သွင်းရန်အဆိုပြုထားသည်။
6C92 compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ ပြင်းထန်သော၊ ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်သောလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ (သို့) ထပ်ခါတလဲလဲလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများဖြစ်ပေါ်စေသည့်တွန်းအားများကိုထိန်းချုပ်ရန်ပျက်ကွက်သည့်ပုံစံတစ်မျိုးဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ ရောဂါလက္ခဏာများတွင်ထပ်ခါတလဲလဲလိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုများသည်ကျန်းမာရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုသို့မဟုတ်အခြားအကျိုးစီးပွားများ၊ လှုပ်ရှားမှုများနှင့်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုလျစ်လျူရှုသည့်အထိလူတစ် ဦး ၏ဘဝကိုအဓိကအာရုံစိုက်ရာရောက်သည်။ အထပ်ထပ်လိင်အပြုအမူသိသိသာသာလျှော့ချရန်မအောင်မြင်အားထုတ်မှုမြောက်မြားစွာ; ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များရှိသော်လည်း၎င်းမှစိတ်ကျေနပ်မှုအနည်းငယ်သာရရှိသော်လည်းထပ်ခါတလဲလဲလိင်ဆက်ဆံသည့်အပြုအမူများကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ပြင်းထန်သော၊ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုသို့မဟုတ်တိုက်တွန်းမှုများကိုထိန်းချုပ်ရန်ပျက်ကွက်မှုပုံစံနှင့်ထပ်မံဖြစ်ပွားသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာ (ဥပမာ - ၆ လနှင့်အထက်) တွင်ပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ မိသားစု၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်, ဒါမှမဟုတ်လည်ပတ်၏အခြားအရေးကြီးသောဒေသများ။ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်လိင်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၊ တိုက်တွန်းချက်များသို့မဟုတ်အပြုအမူများနှင့် ပတ်သက်၍ လုံးဝမသက်ဆိုင်သောဘေးဒုက္ခသည်ဤလိုအပ်ချက်ကိုပြည့်မီရန်မလုံလောက်ပါ။
ယခုအသစ် "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ"(CSBD) ရောဂါပြင်းထန်စွာအရေးကြီးပါသည်။ ပထမဦးစွာပြုလုပ်သူတို့အားဆင်းရဲခက်ခဲမှုကိုသူတို့လိုအပ်ကုသမှုရရှိရန်ကူညီပေးပါမည်။ ဒုတိယအချက်မှာကမ္ဘာပေါ်တွင်ဝန်ကြီးချုပ်ဆေးဝါးကုသမှုကို manual ထဲမှာတရားဝင်ရောဂါ၏တည်ရှိမှုအနာဂတ်သုတေသနလွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်။ တရားဝင်ရောဂါမရှိရင်တချို့ sexology ဂျာနယ်များနှင့်လူကြိုက်များအပါအဝင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မဂ္ဂဇင်း ( စိတ်ပညာယနေ့တွင်) ဆက်စပ်သုတေသနနှင့်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်ထုတ်ဝေရန်ငြင်းဆန်ခဲ့ကြသည်။ (ကလက်ရှိနှင့်အတူပုဂ္ဂလိကစာပေးစာယူမှတဆင့်မျှဝေ PT ဘလော့ဂါ။ ) တရားဝင်ရောဂါ၏မရှိခြင်းပြင်းထန်စွာအရေးကြီးသောသုတေသနထုတ်ဝေနှောင့်နှေးနှင့်ဤရောဂါ၏အန္တရာယ်များ၏ပင်မနားလည်မှုနှေးကွေးခဲ့သည်။
လိုလားသူ porn တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဘယ်သို့ပြောသလဲ?
ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆိုင်ရာပညာရှင်အချို့သည် CSBD ရောဂါသစ်ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုသဘောတရား၏“ ငြင်းပယ်ခြင်း” အဖြစ်အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူကြသည်။ DSM-5 နှင့် ICD-11 တို့ကစွဲလမ်းမှုကိုဖော်ပြရန်“ စွဲလမ်းမှု” ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုအသုံးမပြုသောကြောင့်စွဲလမ်းမှုကိုတားမြစ်ထားသည့်လိင်ဆိုင်ရာပညာရှင်များကလူအများစုနှင့်စာနာတတ်သည့်ဘလော့ဂါများကိုလှည့်စားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မက်၊ ဘိန်းဖြူ၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်း၊ အင်တာနက်ကစားခြင်းများဖြစ်စေ၊ ရောဂါရှာဖွေရေးလက်စွဲနှစ်ခုသည်စွဲလမ်းမှုအစား“ ရောဂါ” ဟူသောဝေါဟာရကိုအသုံးပြုသည်။ တစ်ဖက်တွင်အယောင်ဆောင်သူများကမှန်ကန်တဲ့ - သင် ICD-11 သို့မဟုတ် DSM-5 တွင်ဖော်ပြထားသော“ ညစ်ညမ်းသောအကျင့်၊ ”“ လိင်စွဲလမ်းမှု၊ ” သို့မဟုတ်“ ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုစွဲလမ်းမှု” ကိုသင်မတွေ့ပါ။ သို့သော် DSM-5 အသိအမှတ်ပြုရောဂါများဖြစ်သည့်တိုင်“ မက်သာဖီတမင်းဆေး”၊ “ ကိုကင်းစွဲခြင်း” သို့မဟုတ်“ လောင်းကစားစွဲခြင်း” တို့ကိုလည်းသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းခြင်းကို“ ငြင်းပယ်ခြင်း” ဟုခေါ်ဆိုသူများသည်အထင်အမြင်လွဲစေသောပြောဆိုမှုများဖြစ်သည်။
ဖြည့်စွက်ကာ, တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကအပိုင်းအစ ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု (ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းအဆင့် Psychiatry ဂျာနယ်) နောက်ထပ်ဗလာပြောဆိုချက်ကို undercuts ။ ဒီမှာအနေဖြင့်တစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်င် ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု အပိုင်းအစ, အ ICD-11 အပေါ်ဝတ်ပြုသောသူကျွမ်းကျင်သူများကပူးတွဲရေးသား။ အမှန်မှာစာရေးသူဂျက်ဖရီရိဒ်အဆိုပါ ICD-11 များအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ diagnoses အားလုံး၏တာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစာရေးဆရာကရှင်းရှင်းလင်းလင်း ICD-11 compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုအမှန်ပင်စှဲဖြစ်မည်အကြောင်းထုတ်အုပ်ချုပ်မရှိသေးပေကြောင်းပါစေ။ နောက်ထပ်သုတေသနထုတ်ဝေနေစဉ်မယ့်အစား, အ ICD-11 တစ်ရှေးရိုးစွဲတွေ့စောင့်ဆိုင်း-and ချဉ်းကပ်မွေးစားခဲ့သည်။
... လောလောဆယ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါတစ်ဦးအမူအကျင့်စွဲတို့၏ပေါ်ထွန်းခြင်းဖွဲ့စည်းနိုင်ပါတယ်ရှိမရှိနှင့်ပတ်သက်ပြီးတက်ကြွစွာသိပ္ပံနည်းကျဆွေးနွေးမှုလည်းမရှိ။ ICD-11 များအတွက်တစ်ဦးအတော်လေးရှေးရိုးစွဲအနေအထားကိုကျနော်တို့သေးအဆိုပါရောဂါ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ပါဝင်ဖြစ်စဉ်များပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်, လောင်းကစားခြင်းနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာသူတို့အဖို့ညီမျှရှိမရှိအပေါ်ပြတ်သားသတင်းအချက်အလက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်းအသိအမှတ်ပြု, အကြံပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကြောင့်ပုံမမှန်များ၏ ICD-11 အုပ်စုထဲမှာမဟုတ်ဘဲချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်၏တွင်ထည့်သွင်းမထားပါ။ သုတေသန phenomenology နှင့်အခြေအနေ neurobiological ကျောထောက်နောက်ခံပြု elucidates အဖြစ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါများ၏နားလည်မှုတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်ရေတိုတွင်, ICD-11 တစ်ကြိမ်မှလေးစားမှုနှင့်အသုံးပြုသည့်တူညီသောမဟာဗျူဟာမွေးစားထားပါတယ် "လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါ။ " လောင်းကစားဝိုင်းကပထမဦးစွာဆေးဘကျဆိုငျရာရောဂါပေးပြီခံခဲ့ရသည့်အခါလည်းတစ်ဦး "ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါ" အဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့သည်။ လေ့လာမှုအတော်များများရာပေါင်းများစွာအကြာတွင်လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါယခုအပြုအမူ-စွဲရောဂါအဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ "၌ရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်းအဆိုပါ Pudding ၏သက်သေပြချက်အရသာအတွက် Is: ဒေတာများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ "(2018) Compulsive မှ & Models နှင့်ယူဆချက်ဆက်စပ်စုံစမ်းဖို့လိုအပျနသေ:
တခြားနေရာ (Kraus, Voon နှင့် Potenza) တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း 2016a) ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် CSB နှင့်ပတ်သက်သောစာစောင်များသည် ၁၁,၄၀၀ ကျော်အထိတိုးများလာသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ CSB ၏သဘောတရားနှင့် ပတ်သက်၍ အခြေခံမေးခွန်းများမှာအဖြေမရရှိသေးပါ (Potenza, Gola, Voon, Kor, & Kraus, 2017) ။ ဒါဟာဘယ်လို DSM နှင့်စဉ်းစားရန်သက်ဆိုင်ရာလိမ့်မယ် ရောဂါ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွဲခြားရေး (ICD) သည်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ လုပ်ကိုင်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင်လောင်းကစားရောဂါ (ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းဟုလည်းလူသိများ) နှင့်၎င်းကို DSM-IV နှင့် DSM-5 (ICD-10 နှင့် ICD-11 နှင့်မည်သို့မည်ပုံထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း) ကိုအာရုံစိုက်ရန်သင့်လျော်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်သည်။
DSM-IV တွင်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းကို“ အခြားနေရာများတွင်မသတ်မှတ်ထားသော Impulse-Control Disorder” ဟုအမျိုးအစားခွဲထားသည်။ DSM-5 တွင်၎င်းကို“ ပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်စွဲလမ်းစေသည့်ရောဂါ” အဖြစ်ပြန်လည်သတ်မှတ်ထားသည်။ …အလားတူချဉ်းကပ်မှုမျိုးကို ICB-11 တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သော CSB ကိုအသုံးပြုသင့်သည် (Grant et al ။ , 2014; Kraus et al ။ , 2018).
သူကပြောပါတယ်, အထက်ပါအပိုင်းအစ၏စာရေးဆရာများအချို့ပြီးသားလူသိရှင်ကြားလုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထားများ (လောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ဂိမ်းကစားမယ့် ICD-11 အတွက်သွင်ပြင်လက္ခဏာပါလိမ့်မည်မည်သို့မည်ပုံဖြစ်သော) စွဲလမ်းအပြုအမူကြောင့်တစ်ဦးရောဂါအဖြစ် CSBD လက္ခဏာမှရှိကွောငျးဖျောပွပါပွီ။ ထို့ကြောင့်အချို့သောကျွမ်းကျင်သူများက CSBD နောက်ဆုံးမှာအဖြစ်ကောင်းစွာရှိပါတယ်ပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထား။ ဤတွင်ထိုအကျွမ်းကျင်သူများကပြောကြားခဲ့သည်ဘာလဲ မကြာသေးခင်ကအပိုင်းအစ:
အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ၏ neurobiology သို့သုတေသနအာရုံကိုဘက်လိုက်မှု, မက်လုံးပေး salience အရည်အသွေးများနှင့်စှဲနှင့်အတူများပြားလှသောတူညီအကြံပြုကြောင်းဦးနှောက်-based cue reactivity ကိုပတ်သက်တွေ့ရှိချက်ထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်။ ... ကျနော်တို့အနေနဲ့စွဲလမ်းရောဂါအဖြစ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါခွဲခြားမကြာသေးမီဒေတာတွေနဲ့ကိုက်ညီသည်နှင့် Clinician အကြိုးခံစားစေခြင်းငှါ, သုတေသီများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်ခံစားခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဒီရောဂါကြောင့်ထိခိုက်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
သိသာထင်ရှားသည်မှာအခြားကျွမ်းကျင်သူများသည်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးသောကြောင့် ICD ကိုဤရာထူးသို့မအပ်နှံမီသုတေသနနှင့်ဝေဖန်သုံးသပ်မှုများပိုမိုပြုလုပ်လိုကြသည်။ အသစ်သောရောဂါ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ဒီပုံမှန်မဟုတ်သောမဟုတ်ပါဘူး။ ယခုပင်လျှင် DSM ၏အတွင်းလူ Jon E. Grant၊ JD, MD, MPH၊ ပါမောက္ခ - စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ၊ ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်၊ ဆေးကျောင်း Pritzker ဆေးသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အတွက်ဆောင်းပါး လက်ရှိစိတ်ရောဂါကုသမှု, CSBD သည်“ တိကျမှန်ကန်စွာရောဂါရှာဖွေနိုင်ပြီးအောင်မြင်စွာကုသနိုင်သည်။ ” သူက CSBD ကို“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှု၊ ဆိုလိုသည်မှာသူ၏ကျွမ်းကျင်သူထင်မြင်ချက်အရ ICD-11 သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစွဲလမ်းမှုကို“ ငြင်းပယ်ခြင်း” မရှိခြင်း၊ CSBD ၏ထီးထီးသက်တမ်းကိုသာရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, သုတေသန၏တောင်များကြောင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်း (ထုတ်ဖေါ်အစားအသောက်စွဲလမ်း, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း, ဗီဒီယိုကဂိမ်းကစားခြင်း, အင်တာနက်စွဲ နှင့် porn စွဲ) နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းမှုကိုတူညီသောများစွာကိုဝေမျှ အခြေခံယန္တရား တစ်ဦးမှဦးဆောင် shared ပွောငျးလဲ၏စုဆောင်းမှု ဦးနှောက်ခန္ဓာဗေဒနှင့်ဓာတုဗေဒ၌တည်၏။
နောက်ဆုံးပေါ်သိပ္ပံတိုးတက်မှု၏အလင်းထဲမှာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-အပြုအမူစွဲမော်ဒယ်များ၏ဝေဖန်မှုများအခြေအမြစ်မရှိနှင့်ခေတ်မမီတော့ရှိပါတယ် (မရှိလေ့လာမှုများသေး porn စွဲမော်ဒယ်မှားယွင်းစေရန်လုပ်ဆောင်ခြင်းပါပြီ) ။ အဆိုပါစွဲမော်ဒယ် supporting, ယခုရှိပါတယ် porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲအပေါ် 38 အာရုံကြောလေ့လာမှုများ, (ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲများတွင်ဖြစ်ပေါ်သူတို့အား mirror ကြောင့်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းနှင့် စာပေဒ 14 မှ neuroscience-based ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း) ။ ဖြည့်စွက်ကာ, 22 လေ့လာမှုများ porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ - စွဲလမ်းမှု၏အဓိကညွှန်းကိန်းများဖြစ်သော
မြေမှုန့်ဆေးဘက်လယ်ပြင်၌အခြေချရန်ဆက်လက်နေချိန်မှာ - အအရေးကြီးသောအချက်သစ်ကို ICD-11 porn စွဲရှိသူများသစ်ကို CSBD ရောဂါသုံးပြီး diagnosable ဖြစ်လိမ့်မည်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောအခါဖြစ်ပါတယ်။
ICD ကိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကထောက်ပံ့သည်။ ICD ၏ရည်ရွယ်ချက်အရ“ ဒါဟာကမ္ဘာကြီးကိုသာမန်ဘာသာစကားနဲ့ကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးမျှဝေပေးတယ်။ ICD သည်ရောဂါများ၊ ရောဂါများ၊ ဒဏ်ရာများနှင့်အခြားဆက်စပ်သောကျန်းမာရေးအခြေအနေများစကြဝuniverseာကိုသတ်မှတ်သည်။ ဒီရပိုင်ခွင့်တွေအားလုံးကိုလွှမ်းခြုံနိုင်အောင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံစာရင်းပြုစုထားတယ်။ ” (ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့, 2018) ။ သို့ဖြစ်ရာရည်မှန်းချက်မှာတရားဝင်ကျန်းမာရေးပြproblemနာတိုင်းကိုဖုံးအုပ်ရန်ဖြစ်သည်၊
ထိုသို့သောတူညီနေမှုရှင်းရှင်းလင်းလင်း diagnoses, သင့်လျော်သောကုသမှုနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဘို့အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်အားလုံးနီးပါး Clinician (စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်, စိတ်ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ, လက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်, စွဲကုသမှုပေးသူနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်အလုပ်လုပ်သောသူတို့အား) ပြင်းထန်စွာ CSBD ၏အဆိုပြု ICD ရောဂါ၏ထုတ်ဝေမျက်နှာသာ။
သို့သော်အခြားစည်းကမ်းများရှိကြောင်းသတိရပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ဆရာ ၀ န်များမပါ ၀ င်သူများသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်ရှိသည်။ သူတို့ကပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့အားဆင်းရဲဒုက္ခမဆက်ဆံကြဘူး။ အမှန်မှာ၊ သူတို့သည်လူနာများလိုအပ်သည့်အကူအညီကိုရယူရန်နှင့်ပthatိပက္ခဖြစ်စေသည့်တွန်းအားများပင်ရှိတတ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံသတင်းစာများတွင်အလွန်အသံကျယ်ကျယ်ရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံဤအမျိုးအစားမဟုတ်သောအမျိုးအစားခွဲခြားသောအုပ်စုများကိုစိတ်ပညာမီဒီယာ၊ ဂိမ်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းများ (နှင့်သူတို့၏သုတေသီများ)၊ လူမှုဗေဒပညာရှင်များ၊ အချို့သောလိင်ပညာရှင်များနှင့်မီဒီယာသုတေသီများတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ကြီးမားသောစက်မှုလုပ်ငန်းကြီးများသည်“ အတွေးအမြင်ခေါင်းဆောင်များ” ၏သိသိသာသာသိမ်းဆည်းထားသူများကိုပေးဆပ်ရန်ထိုကဲ့သို့သောစက်မှုလုပ်ငန်းများပေါ်လစီ / တည်ရှိမှုကိုမြင်လိုသည့်ရာထူးများကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းသည်အဆန်းမဟုတ်ချေ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကွဲပြားသောစည်းကမ်းချက်များသည်အလွန်ကွဲပြားသောရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်ကိုနားလည်ရန်ကောင်းသည်။ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ် ဦး ၏ရည်ရွယ်ချက်ကလူသားတို့၏သာယာဝပြောရေးကိုပိုမိုအားကောင်းစေလား၊
Update ကို။ ပိုပြီးအဘို့ဤအ2ဆောင်းပါးတွေကိုကြည့်ပါ:
Propagandists WHO ကရဲ့ ICD-11 "porn စွဲခြင်းနှင့်လိင်စွဲပယ်ချ" အဲဒီမှားယွင်းသောပြောဆိုချက်ကိုလောင်စာစာတမ်းများရှေ့နောက်မ
စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေကြောင့်ပုံမမှန်အတွက်ဟန်ချက်ညီတရားဝင်မှု, utility ကိုနှင့်အများပြည်သူကျန်းမာရေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား
Debunking "ဘာကြောင့်ကျနော်တို့ဆဲ Porn အကဲခတ်အကြောင်းဒါကြောင့်စိုးရိမ်နေပါသလား?" (မာတီ Klein, တေလာ Kohut နှင့်နီကိုးလ် Prause အားဖြင့်)
တီထွင်မှုများနှင့်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်များနှင့် neurodevelopmental မမှန်များ၏ ICD-11 ခွဲခြားပြောင်းလဲမှုများ (2019)
Propagandists WHO ကရဲ့ ICD-11 "porn စွဲခြင်းနှင့်လိင်စွဲပယ်ချ" အဲဒီမှားယွင်းသောပြောဆိုချက်ကိုလောင်စာ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများနှင့် ICD-11 ရှာဖွေရေး features တွေရှေ့နောက်မ
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်စပ်သော ICD-11 အခန်းကြီးအပေါ်ပြည်သူ့သက်ဆိုင်သူများ '' မှတ်ချက် (2019)